NextMapping | Mpanazatra ho an'ny mpandraharaha
NextMapping™ ho an'ny mpandraharaha
Mafy tsara isika eo amin'ny toekarena goavambe.
Solopreneurs sy mpandraharaha no ho avin'ny asa. Ny fikarohana dia mampiseho fa amin'ny taona 2025 freelancer sy mpiasa miasa dia hahazo ampahany tsara amin'ny mpiasa. Upwork dia nahita fa ny 47% amin'ireo XnUMX-18 efa be taona dia nandoka tamin'ny taona lasa. Ny angon-drakitra dia mampiseho fa isaky ny andiany vaovao dia olona maro no misafidy ny ho tompon'andraikitra ao aminy ary hanafaingana ny fivoarana sy fahombiazana amin'ny mpanazatra matihanina mety.
Na efa mpandraharaha mahomby ianao na mitady ny hialanao amin'ny Cheryl Cran manokana ary ny ekipany dia manolotra paikadin'ny mpanazatra amin'ny orinasa hanampy anao hahomby.
Raha misy zava-dehibe ilaina, na dia mifanohitra aminao aza ny olana, dia tokony ataonao ihany izany. ”
Mitana hetsika mivantana an-taona ho an'ireo mpandraharaha izay ahitantsika ireo faritra lehibe hanaporofoana ny orinasanao amin'ny ho avy. Tafiditra ao anatin'izany ny hacks sy ny teknolojia ho fanamorana sy hanamorana ny fitomboan'ny fandraharahana. Ny manam-pahaizana momba ny vahiny dia ahitana ny CIO, mpahay siansa momba ny fitondran-tena, mpahay siansa, psikolojia ny manam-pahaizana mahomby ary maro hafa.
NextMapetraka ny orinasanao amin'ny fivoarana lehibe
Ny olona rehetra izay nahavita zavatra lehibe dia nanao izany tamin'ny fanampiana azy. Ireo mpandraharaha lehibe toa an'i Richard Branson, Sara Blakely, Elon Musk, ary Lori Greiner dia samy manana ny mpanazatra mpitarika ary / na mpanazatra mpandraharaha hanome fahalalana, fomba fijery ary toe-javatra. Ny NextMapping ™ ho an'ny mpandraharaha mpanazatra dia natao manokana amin'ny filanao tokana. Amin'ny alalàn'ny fanontaniana sy fanombanana dia mamorona 'Nextmap' fomba mahazatra ho anao sy ny orinasanao. Manolotra volana 6 na fonosana mpanazatra mpandraharaha 12 volana isika.
NextMapping ™ isan-taona ho an'ny hetsika mpandraharaha
Indray mandeha isan-taona dia miara-mivory miaraka amin'ireo mpandraharaha mitovy hevitra isika amin'ny toerana fisintomana hitodihana mba hahafahana mametaka izay mombamomba anao amin'ny maha-mpandraharaha anao ary inona no manjo ny orinasanao. Amin'ity hetsika fampiroboroboana mpandraharaha 2 ity dia hohenoinao amin'ireo futuriste, strateurs, lozisialy teknolojia, mpitarika amin'ny sehatry ny eritreritra evolisiona ary mpanazatra momba ny orinasa manam-pahaizana manokana. Havelanao miaraka amin'ny 'sarintany' ataonao, ny drafitra ary ny tanjona matotra ianao, hanampiana anao hanao tsara kokoa noho ny hamina mialoha ny hoavinao feno fahasambarana…. Hametraka azy io ianao.
12 fandaharana fampianarana momba ny fitomboana miavaka
Midira hiaraka amin'ny mpanorina anay, Cheryl Cran amin'ny alàlan'ny stream mivantana indray mandeha isam-bolana mandritra ny volana 12 ary miditra amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fandaharanasan-tsarimihetsika, mpanazatra amin'ny matihanina matihanina, maodely, fitaovana ary fitaovana maimaimpoana. Hahita fomba vaovao hampitomboana ny orinasanao ianao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ilay vinavinan'ny tanjom-pitiavana vaovao. Hifandray amin'ireo mpandraharaha hafa toa anao ianao izay hizara ireo tsiambaratelo fahombiazany sy lesona ianarany.
Fahazoana voafetra voafetra.
Mifandraisa aminay mba hanao sonia